Ajụjụ - Dongguan Ruizheng Industry Co., Ltd
Mpempe akwụkwọ metal akụkụ
Olee otú m na-arịọ a quote?
Ọ dị mfe na-arịọ a quote ọrụ si RUIZHENG. Nanị kpọtụrụ anyị ọrụ site E-mail, Phone, Fax, anyị ga-enwe nnọọ obi ụtọ na-enye gị a ezi uche price!
Olee otú ogologo bụ a see okwu oge?
Na-emekarị, mgbe anyị natara gị RFQ ọmụma, RUIZHENG nwere ike inye a kacha mma price n'ihi na ị ọmụmaatụ n'ime 2-arụ ọrụ ụbọchị.
Tupu a see okwu, gịnị ka RUIZHENG mkpa ịmara?
RUIZHENG mkpa na-enweta gị ịbịaru, ụlọ ma ọ bụ sample, na ihe onwunwe, quote ibu, n'elu omume Ama. Ka ọ dịgodị, biko nwekwara ka RUIZHENG mara gị ụlọ ọrụ aha, kọntaktị mmadụ, email na consignee address.
Olee ụdị ihe ndị ị na-eru nke machining?
Anyị na-emepụta ịghasa igwe akụkụ na CNC mbịne akụkụ si aluminum, ọla, ọla kọpa, ígwè, na igwe anaghị agba nchara, nakwa dị ka ụfọdụ plastic n'elu arịrịọ.
Na CNC machining ọrụ, ihe bụ ihe kasị eri-irè ibu ịtụ?
A, dị ka olu na-abawanye, na kwa unit price mbelata. Nke a bụ n'ihi na melite na-akwụ ụgwọ na-gbasara a ibu ibu nke akụkụ. Na RUIZHENG, anyị na-enwe ma na-amị nnukwu ibu machined akụkụ na leveraging anyị CNC ngwá na ahụmahụ anya izute ala olu iwu akụ na ụba.
Gịnị bụ gị nkezi ụzọ oge?
Nkịtị ụzọ oge bụ mkpokọta 4 izu emetụta ọrụ ibu & mgbagwoju nke akụkụ nhazi. RUIZHENG na-agbalịsi ike ịbụ gị na oge na-emeputa nke mmepụta akụkụ.
Olee otú m nwere belata na-eri nke m machined akụkụ?
A, na-amụba olu nke gị iji bụ ihe kasị doro anya ụzọ isi belata na-eri na a kwa akụkụ niile; Otú ọ dị, e ọtụtụ ihe na-atụle. A bụ isi echiche bụ belata ọrụ ọ bụla nzọụkwụ. Na-akụkụ tolerances ezi uche na-adịghị na-ewu na extra uko tolerances na-adịghị mkpa maka njedebe were. Na taa gburugburu ebe obibi na-akpata nchegbu, akụkụ na-ejizi na ihicha bụ ebe bụ isi nke na-eri. Akpan akpan ke ebe nke threaded esịtidem oghere, akụkụ nhicha-agbakwụnye, ka ikpeazụ price. Ụfọdụ mkpa onye mbukota na ihicha, ma ọ bụrụ na gị na akụkụ-adịghị, ọ nwere ike belata na-eri nke mmepụta
Ọ RUIZHENG enyemaka na akụkụ imewe ma ọ bụ na-atụ aro na-eri ego jikoro?
Ee. Anyị hụrụ ihe ịma aka nke na-eweta anyị engineering na
mmepụta ahụmahụ na-agba na ịma aka ndị ọhụrụ. Anyị nwere ike inye
oru aka na imewe, machining ogbugba ndu, nhọrọ ma ọ bụ
ngwaọrụ, na finishing nzọụkwụ. Idebe ọgwụgwụ ojiji nke akụkụ
n'uche, anyị na-emekarị chọta a obere imewe tweak, a mgbanwe ihe onwunwe ma ọ bụ
ndidi, wdg na pụrụ ịkpata a pụrụ ịtụkwasị obi, na-na-arụ akụkụ
na a belatara mmepụta na-eri. The akụkụ nwere ihe ịga nke ọma, na ya
azụmahịa gị ihe mgbaru ọsọ!
Olee otú m pụrụ ijide n'aka na nke na-ezi akụkụ na ihe na-oge nnyefe?
I nwere ike belata ihe ize ndụ nke na-anata usụhọde akụkụ ma ọ bụ onye na-adịghị nnyefe bụ isi ihe ị na-ahọrọ a reputable soplaya na-ekwurịta okwu gị mkpa na na soplaya. Jide n'aka gị soplaya nwere a quality omume na dabara gị mkpa. Ọ bụrụ na ị chọrọ a akụkụ on a mgbe niile, i nwere ike inyere obi sie pụrụ ịdabere na nnyefe na ọrụ site na iji a blanket iji na mgbe ndokwa a. Nke a na ụdị iji nwekwara ike nyere aka belata kwa akụkụ-eri nke gị nkenke machined mmiri
Your price anya ọma maka elu quantities, ma m na-achọghị na na ngwaahịa na ọtụtụ akụkụ. . . ihe a na-RUIZHENG njikere ime?
O nweghị onye chọrọ na-ebu yiri nkata ọ bụla ọzọ. Anyị nwere ike kpakorita ụfọdụ ụdị nkwekọrịta na ibu ogbe nha, ma ga-atụ anya na akụkụ a ga-na otutu releases n'elu a negotiated ezi uche oge. Ahịa ndị nwere ike ime ka ibu batches adịghị na-na-uru nke ndị aku na hotara ahịa.?
Gịnị tolerances nwere ike Ruizheng machined milled & Gbanwere Parts jide?
Tolerances iche iche dabere ụdị na ọkwa nke akụrụngwa na anyị na-machining, ihe anyị na-eme ngwaọrụ nke, na nke igwe anyị na-eji eme ka a akpan akpan akụkụ. Tighter tolerances nwere ike nweta na abụọ arụmọrụ dị ka-egweri, honing, na lapping. A sara mbara dabeere azịza nke ajụjụ a bụ ike na-enye. Ọ kasị mma-aza ajụjụ a na a akụkụ-site-akụkụ ihe ndabere na ihe engineering nyochaa.
Ekwentị: +86 769 82385337
Okwu: Nke 51, Jinghai East Road, South Shatou District, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.